युके पाउण्ड र कुवेती दिनारसहित केही देशको मुल्य बढ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ? – osnepal tv
युके पाउण्ड र कुवेती दिनारसहित केही देशको मुल्य बढ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
काठमाडौं- आज सोमबार प्राय मलेसियन रिँगिट बाहेक सबै देशको मुल्य ओरालो लागेको छ । आज अमेरीकी डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ १३ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै युएई दिराम एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १३९ रुपैयाँ ८२ र बिक्रिदर १४० रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २६ रुपैयाँ ६५ पैसा, बिक्रिदर २६ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर २९२ रुपैयाँ १३ पैसा छ
भने बिक्रिदर २९३ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ। त्यस्तैगरी कुवेती दिनार एकको खरिददर ३६३ रुपैयाँ २९ पैसा छ भने बिक्रिदर ३६५ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ।
Previous article आईफा अवार्ड प्रति मुन्द्रेको आक्रोश !फुलन्देकी आमा र लट्टेबारे बोले (हेर्नुस् भिडियो)
Next article प्रदेश ५ सरकारको चार करोड ८७ लाख ८९ हजार लागतमा सभाहल निर्माण शुरु
आईफा अवार्ड प्रति मुन्द्रेको आक्रोश !फुलन्देकी आमा र लट्टेबारे बोले (हेर्नुस् भिडियो)
प्रदेश ५ सरकारको चार करोड ८७ लाख ८९ हजार लागतमा सभाहल निर्माण शुरु